Fomba 9 ilaina hanamboarana haingana ny lesoka Outlook 0x800CCC0E - Blog fanarenana data
Home Data Recovery Famerenana rakitra Fanarenana mailaka Outlook Data Recovery Fomba 9 ilaina hanamboarana haingana ny lesoka Outlook 0x800CCC0E
Fomba 9 ilaina hanamboarana haingana ny lesoka Outlook 0x800CCC0E
Leave a Comment Outlook Data Recovery, Vahaolana Outlook Jona 22, 2021
Indraindray raha manandrana mandefa na mahazo mailaka akory ianao, indrindra rehefa mampiasa kaonty IMAP dia mety hihaona amin'ny Outlook Error 0x800CCC0E ianao. Amin'ity lahatsoratra amin'ny antsipiriany ity dia manolotra anao fomba 9 mahasoa sy mahomby hanarenana ny olana izahay.
Ny fampiharana MS Outlook dia mijanona ho vato fehizoro amin'ny fifandraisana amin'ny orinasa ho an'ny orinasa an-tapitrisany na dia ankehitriny aza. Noho ny fahatsapany ny lazan'ny mpanjifan'ny mailaka azy dia manohy manampy endri-javatra maro kokoa izy. Manomboka amin'ny fanatsarana ny fanatsarana ao amin'ny kalandrie nozarainy ka hatramin'ny fanampiana feo ho an'ireo kinova iOS, ny lozisialy rindrambaiko ao Redmond dia manao ny zava-drehetra hitazomana an'i Outlook ho safidy tian'ny orinasa. Saingy, ity fampiharana mahatalanjona ity dia mazàna tsy afaka amin'ny resaka teething izay afaka miseho tsindraindray. Olana iray toy izany ny Outlook Error 0x800CCC0E izay afaka mivoaka amin'ny manga ho an'ireo mpampiasa mampiasa kaonty IMAP. Mba hamahana ny olana amin'ny fotoana fohy dia andramo ireo fomba mahasoa 9 voalaza etsy ambany.
# 1. Fifanoherana amin'ny fampiharana Antivirus
Indraindray ny rindranasa Antivirus azonao ampiasaina dia mety hifanipaka amin'ny rindranasa Outlook. Indrindra raha toa ianao ka namela ny fisintomana mailaka fisehoan-javatra hita amin'ny fampiharana maro toy izany. Raha hitoka-monina ity olana ity dia eritrereto ny hanajanonana ny fampiharana Antivirus.
# 2. Zahao ny toe-javatra Firewall anao
Raha toa ianao ka mampiasa Firewall hiarovana ny rafitrao, mety ho hitanao fa indraindray izy io koa dia afaka manamboatra ny fomba fiasa mahazatra an'ny rindranasa Outlook. Azonao atao ny manandrana mampandeha ny rindranasa Firewall na mampiditra ny rindranasa Outlook ao amin'ny lisitry ny fampiharana avela.
# 3. Zahao ny fifandraisana amin'ny Internet
Ny fifandraisana Internet patchy na ny olana misy eo anelanelan'ny fifandraisana dia mety hipoitra ity lesoka ity raha manandrana mifandray amin'ny kaonty IMAP ianao. Avereno jerena ny fifandraisanao amin'ny Internet ary raha azo atao dia andramo ny mampiasa fifandraisana hafa hampisarahana ilay olana.
Amin'ny toe-javatra sasany, mety hivily tsy nahy ny fiasa Outlook hiasa ivelan'ny Internet isika. Raha izany no izy dia zahao ny Safidy ivelan'ny asa ary ahintsy ny fikirana.
# 4. Olana mety hitranga miaraka amin'ny isa amin'ny seranana
Amin'ny tranga sasany, ny tarehimarika seranana tsy mety dia mety hampirehitra ity olana ity. Tena marina izany ho an'ny kaonty IMAP tantanan'ny orinasa mety mampiasa fampiasa manokana. Zahao amin'ny mpanome tolotra Internet anao ny nomerao seranana marina ilaina mba hidirana amin'ny kaonty mailakao amin'ny mpanjifa mailaka mifototra amin'ny birao.
# 5. Tafiditra ao anaty boaty ny mailaka
Indraindray misy mailaka sasany mihitsoka ao anaty Outlook Outbox. Ny trangan-javatra toy izany dia matetika hita ao amin'ireo kinova MS Outlook taloha. Amin'ny scenario toy izany dia tokony hamelona ny safidy Work Offline ao amin'ny Outlook ianao ary hamindra ireo mailaka ireo amin'ny fampirimana hafa.
# 6. Atsaharo ny Add-ins toy ny sivana Spam an'ny antoko fahatelo
Amin'ny tranga sasany, ny Add-ins avy amin'ny mpamatsy antoko fahatelo, indrindra ny sivana spam dia mety hipoitra ity olana ity. Hamarino tsara fa tsy hampandeha anao daholo ireo fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo ao amin'ny Outlook mba hitokantokana ity mety ho antony.
# 7. Diniho ny mety hisian'ny fisie PST mety lo
Amin'ny tranga marobe, hita fa ny rakitra PST simba dia mety hiteraka tsy fahatomombanana noho ny fanipazana azy ao amin'ny application Outlook. Raha sendra miahiahy ianao fa nisafotofoto ny rakitra data PST dia manaova fampiharana fanarenana matotra toa anao DataNumen Outlook Repair hamerenana amin'ny laoniny ny atin'ny rakitra PST. Vantany vao vita ny fanarenana dia sokafy ny rakitra data PST vaovao ao amin'ny MS Outlook ary andramo mandefa na mandray mailaka.
# 8. Miaraha miasa amin'ny mombamomba an'i Outlook
Raha diso hevitra ny mombamomba anao Outlook dia mety hipoitra ny Outlook Error 0x800CCC0E. Amin'ny tranga toy izany dia torohevitra ny mamorona profil vaovao amin'ny fanarahana ireo dingana voalaza etsy ambany
Ao amin'ny Windows Search Box manintona ao Takelaka fikirakirana
Sokafy ny Takelaka fikirakirana App
ao amin'ny mahitsizoro fikarohana eo amin'ny fizarana ankavanana ambony amin'ny Takelaka fikirakirana efijery, soraty ao Mail
Rehefa Mail miseho ny safidy, kitiho eo
ao amin'ny Fametrahana mailaka - Outlook tsindrio ny efijery Asehoy ireo profil
Kitiho manaraka Add mamorona profil vaovao
Ampio ny ankehitriny anao Mail kaonty amin'ny mombamomba anao vaovao ary araho ny torolàlana amin'ny efijery mba hamenoana ny fizotrany.
Manaraka indray sokafy ny Asehoy ireo profil Safidio ary safidio ny piraofilina vaovao ary apetrahoo ho default amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny Ampiasao hatrany ity Profile ity safidy.
# 9. Mihazakazaha mamerina ny rafitra hamerina ilay rafitra amin'ny daty teo aloha
Na dia misy aza ireo dingana nitanisa anay etsy ambony dia mety hamaha ny olana Error Outlook 0x800CCC0E izay iainanao, amin'ny tranga sasany dia mety misy rare mety mbola hitohizan'ny olana. Amin'ny hetsika toy izany dia diniho ny fihazakazahana ny System Restore endri-javatra amin'ny Windows hamerina ny rafitra amin'ny daty taloha raha toa ka niasa tamin'ny endrika tonga lafatra ny rindranasa Outlook.
DataNumen Exchange Recovery 8.6 dia navoaka tamin'ny 29 Jolay 2021
Vahaolana 11 mahomby rehefa tampoka matetika ny Outlook
Vahaolana 3 rehefa tsy mamaly ny fitaovana fanamboarana Inbox MS Outlook
Vahaolana 3 rehefa tsy nahavita nanampy ny laharana amin'ny FLT ny ScanPST
Fomba 3 hamahana ny lesoka tsy fantatra 0x80070002 ao amin'ny Outlook
Sokajy Select Category Data backup (103) Fanarenana data (3,896) Famerenana rakitra (3,825) Famerenana rakitra sy tahiry backup (55) BKF Famerenana rakitra (7) CAB Famerenana rakitra (1) RAR Famerenana rakitra (4) TAR Famerenana rakitra (2) Zip Famerenana rakitra (39) Fanarenana data (354) DBF Fanarenana data (1) Oracle Fanarenana data (4) SQL Server Fanarenana data (349) Fanarenana mailaka (2,265) Exchange OST Famerenana rakitra (100) Outlook Data Recovery (2,171) Fitaovana fanamboarana boaty (4) Outlook Express DBX File Recovery (4) Outlook PST Password Recovery (1) Fanarenana sary sy rakitra (40) AutoCAD DWG Famerenana rakitra (8) PDF Famerenana rakitra (27) PSD Fanarenana sary (5) Office File Recovery (1,059) Access Database Recovery (342) Excel File Recovery (308) PowerPoint Famerenana rakitra (5) Word Document Recovery (401) Famerenana rakitra | Data Recovery (13) Famerenana System System (13) Famerenana System System (7) Undelete (1) Fanarenana fitaovana (2) Misc (2) Vahaolana (2,571) Archive, Compression & Backup Solutions (3) Zip Vahaolana Archive (3) Database Solutions (294) SQL Server Vahaolana (294) Vahaolana amin'ny birao (2,274) Access Solutions (241) Excel Solutions (353) Fitaovana Excel & Fanampiny (28) Vahaolana fifanakalozana (71) Vahaolana Outlook (1,222) Fitaovana Outlook & Add-in (6) Word Solutions (387) Uncategorized (16)
Tahiry Select Month Jolay 2021 (7) Jona 2021 (9) Mey 2021 (11) Martsa 2021 (3) Novambra 2020 (10) Oktobra 2020 (20) Septambra 2020 (50) Aogositra 2020 (55) Jolay 2020 (55) Jona 2020 (27) Mey 2020 (3) Martsa 2020 (19) Jona 2019 (3) Mey 2019 (5) Aprily 2019 (1) Martsa 2019 (7) Febroary 2019 (9) Novambra 2018 (1) Jona 2018 (19) Mey 2018 (61) Aprily 2018 (62) Martsa 2018 (100) Febroary 2018 (78) Janoary 2018 (104) Desambra 2017 (104) Novambra 2017 (105) Oktobra 2017 (93) Septambra 2017 (82) Aogositra 2017 (90) Jolay 2017 (105) Jona 2017 (110) Mey 2017 (134) Aprily 2017 (122) Martsa 2017 (154) Febroary 2017 (139) Janoary 2017 (146) Desambra 2016 (195) Novambra 2016 (253) Oktobra 2016 (159) Septambra 2016 (118) Aogositra 2016 (138) Jolay 2016 (145) Jona 2016 (85) Mey 2016 (65) Aprily 2016 (11) Novambra 2015 (12) Oktobra 2015 (27) Septambra 2015 (31) Aogositra 2015 (17) Jolay 2015 (32) Jona 2015 (1) Mey 2015 (16) Martsa 2015 (12) Janoary 2015 (23) Desambra 2014 (25) Novambra 2014 (33) Oktobra 2014 (9) Septambra 2014 (51) Aogositra 2014 (67) Aprily 2014 (38) Martsa 2014 (5) Febroary 2014 (16) Janoary 2014 (19) Desambra 2013 (13) Novambra 2013 (21) Oktobra 2013 (16) Septambra 2013 (34) Aogositra 2013 (17) Jolay 2013 (20) Novambra 2010 (21) Oktobra 2010 (41) Septambra 2010 (21) Aogositra 2010 (21) Jolay 2010 (30)